Vaovao - toerana anaovana valizy
Toerana ampiasaina amin'ny valizy
Toerana anaovana valizy: Na aiza na aiza!
08 Nov 2017 Mpanoratra Greg Johnson
Ny valva dia azo jerena amin'ny toerana rehetra amin'izao fotoana izao: any an-tranontsika, eny ambanin'ny arabe, amin'ny tranobe ara-barotra sy amin'ny toerana an'arivony maro ao anaty toby famokarana herinaratra sy rano, fikosoham-taratasy, fanadiovana, zavamaniry simika ary fotodrafitrasa sy fotodrafitrasa hafa.
Ny indostrian'ny valva dia tena manana soroka lehibe, misy fizarana miovaova arakaraka ny fizarana rano hatramin'ny angovo nokleary mankany amin'ny solika sy gazy any ambony sy any ambany. Ny tsirairay amin'ireo indostrian'ny mpampiasa farany dia mampiasa karazana valves fototra; na izany aza, ny pitsopitsony momba ny fananganana sy ny akora matetika dia samy hafa be. Ity misy santionany:
Eo amin'ny tontolon'ny fizarana rano dia somary ambany hatrany ny fanerena ary manodidina ny mari-pana. Ireo zava-misy fampiharana roa ireo dia mamela elanelana famolavolana valizy maromaro izay tsy ho hita amin'ny fitaovana sarotra tohina toy ny valves etona ambony hafanana. Ny mari-pana momba ny serivisy an-drano dia mamela ny fampiasana elastomer sy tombo-kase fingotra tsy mety amin'ny toeran-kafa. Ireo fitaovana malefaka ireo dia mamela ny valves rano hametahana mafy ny drip.
Ny fiheverana iray hafa amin'ny valizy serivisy amin'ny rano dia ny safidy amin'ny fitaovana fanamboarana. Ny vy sy ny fantsom-pandehanana dia be mpampiasa amin'ny rafi-drano, indrindra ny tsipika savaivony lehibe any ivelany. Ny tsipika kely dia kely dia azo raisina tsara miaraka amin'ny fitaovana valizy varahina.
Ny tsindry fahitan'ny ankamaroan'ny valizy dia matetika ambany 200 psi. Midika izany fa tsy ilaina ny famolavolana tosika avo kokoa noho ny rindrina matevina. Raha ny voalaza dia misy tranga manangana valves-drano hamahana ny fanerena avo kokoa, hatramin'ny 300 psi. Ireo fampiharana ireo dia matetika amin'ny lakandrano lava manakaiky ny loharanon'ny tsindry. Indraindray koa ny valves amin'ny rano avo lenta dia hita any amin'ny teboka avo indrindra amin'ny tohodrano avo.
Ny American Water Works Association (AWWA) dia namoaka famaritana manarona karazana valves sy mpikatroka maro samihafa ampiasaina amin'ny fampiharana rano.
Ny lafiny atsimbon'ny rano fisotro madio dia miditra amin'ny fotodrafitrasa na rafitra iray dia ny famoahana rano maloto na fantsona. Ireo tsipika ireo dia manangona ny tsiranoka maloto sy ny solid ary mampita izany any amin'ny toeram-pitsaboana maloto. Ireto zavamaniry fitsaboana ireto dia misy fantsom-panafody ambany sy valves betsaka hanatanterahana ny "asany maloto". Ny fepetra takiana amin'ny valves amin'ny rano maloto amin'ny tranga maro dia maivana kokoa noho ny fepetra takiana amin'ny serivisy rano madio. Ny vavahady vy sy ny valizy fanaraha-maso dia safidy malaza indrindra amin'ity karazana serivisy ity. Valve mahazatra ao amin'ity serivisy ity dia natsangana nifanaraka tamin'ny tsipiriany AWWA.
Ny ankamaroan'ny angovo herinaratra ateraky ny Etazonia dia novokarina tamin'ny zavamaniry etona izay mampiasa solika fosil sy turbine haingam-pandeha. Ny famerenana ny fonon'ny orinasa mpamokatra herinaratra maoderina dia mety hijerena ireo rafitra fantsom-panafanana avo lenta. Ireo tsipika lehibe ireo no manakiana indrindra amin'ny fizotry ny famokarana herinaratra.
Ny valva vavahady dia mijanona ho safidy lehibe indrindra ho an'ny famokarana herinaratra amin'ny / na fampiharana, na dia misy tanjona manokana aza dia hita ihany koa valves valin-bolan'ny Y-pattern. Ny valva-panatanjahan-tena avo lenta sy avo lenta dia mahazo vahana amin'ny mpamorona angovo sasany ary miditra an-tsehatra amin'ity tontolo anjakan'ny valizy ity.
Ny metallurgy dia manakiana ny valves amin'ny fampiharana herinaratra, indrindra ireo miasa ao anatin'ny tandindon'ny tsindry sy mari-pana mahery vaika na mahery vaika. F91, F92, C12A, miaraka amin'ny firaka Inconel sy vy tsy misy fangarony maro dia matetika no ampiasaina amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra ankehitriny. Ny kilasin'ny tsindry dia misy ny 1500, 2500 ary amin'ny tranga sasany 4500. Ny toetran'ny zavamaniry mpamokatra herinaratra (ireo miasa raha ilaina fotsiny) dia mametraka fantsom-bolo lehibe sy fantsona, mitaky volavola mafonja hifehezana ny fitambaran'ny bisikileta, ny mari-pana ary ny tsindry.
Ho fanampin'ny valves etona lehibe, ny toby famokarana herinaratra dia feno fantsona fanampiny, feno vavahady, globe, valizy, lolo ary valves valizy.
Ireo toby nokleary dia miasa amin'ny fitsipika turbine hafainganam-pandeha ihany / hafainganam-pandeha. Ny mahasamihafa azy voalohany dia ny famokarana angovo avy amin'ny hafanana avy amin'ny fizotry ny fizarana ny etona. Ny valva famokarana herinaratra nokleary dia mitovy amin'ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy, afa-tsy ny tetirazana sy ny fitakiana fanampiny azo ianteherana tanteraka. Valve nokleary dia amboarina amin'ny fenitra avo lenta, miaraka amin'ny antontan-taratasy fanamarinana sy fanaraha-maso mameno pejy an-jatony.
Famokarana menaka sy gazy
Ny lavadrano misy solika sy etona ary toeram-pamokarana dia mpampiasa valves be, anisan'izany ny valves mavesatra be. Na dia tsy azo inoana intsony aza ny fiparitahan'ny diloilo mitete metatra an-jatony amin'ny rivotra dia maneho ny tsindry mety hitrangan'ny solika sy gazy ambanin'ny tany. Izany no antony ametrahana lohan-doha na hazo krismasy eo an-tampon'ny fantsona lava iray amin'ny fantsakana. Ireo fivoriambe ireo, miaraka amina valves sy fittings manokana, dia natao hiatrehana ny fanerena hatramin'ny 10.000 psi. Na dia tsy fahita firy amin'ny lavadrano nohadina an-tanety amin'izao fotoana izao, ny tsindry mafy tafahoatra dia matetika hita any amin'ny lava-drano amoron-dranomasina lalina.
Ny famolavolana fitaovana Wellhead dia rakotry ny famaritana API toy ny 6A, ny famaritana ny Wellhead ary ny Christmas Tree Equipment. Ny valves rakotra 6A dia natao ho an'ny fanerena avo lenta saingy ny mari-pana antonony. Ny ankamaroan'ny hazo krismasy dia misy valves vavahady sy valva manokana eto an-tany antsoina hoe koka. Ny koka dia ampiasaina hifehezana ny fikorianan'ny fantsakana.
Ho fanampin'ireo lohany, ireo fotodrafitrasa fanamoriana marobe dia mipetraka eo amin'ny sehatry ny solika na solika. Ny valizy fanodinana hikarakarana mialoha ny solika na gazy dia mitaky valve maromaro. Ireo valva ireo dia mazàna vy vy karbaona ho an'ny kilasy ambany.
Indraindray, misy tsiranoka manimba tena — hidrôdiôma sulfida — no hita ao amin'ny reniranon'ny solika. Ity fitaovana ity, izay antsoina koa hoe gazy marikivy, dia mety hahafaty. Mba handresena ny fanambin'ny entona marikivy dia tsy maintsy arahana fitaovana manokana na teknika fanodinana fitaovana mifanaraka amin'ny famaritana NACE International MR0175.
Indostria any ivelany
Ny rafitry ny fantsom-panafody ho an'ny rig solika any ivelany sy ny toeram-pamokarana dia misy valves marobe namboarina tamin'ny famaritana isan-karazany mba hifehezana ireo karazana fanamby amin'ny fanaraha-maso. Ireo fotodrafitrasa ireo koa dia misy tadivavarana sy rafitra fanaraha-maso isan-karazany.
Ho an'ny toeram-pamokarana solika, ny fo manara-penitra no tena rafitra fanarenana solika na gazy. Na dia tsy eo amin'ny lampihazo aza matetika dia rafi-pamokarana maro no mampiasa hazo krismasy sy ny rafitra fantsom-pitaterana izay miasa amin'ny halalin'ny 10,000 metatra na mihoatra. Ity fitaovam-pamokarana ity dia namboarina tamin'ny fenitra marimaritra iraisana momba ny petrole Amerikanina (API) ary voatonona ao amin'ny API Recommended Practices (RPs) maro.
Amin'ny ankamaroan'ny sehatra solika lehibe, misy dingana fanampiny ampiharina amin'ny tsiranoka manta avy amin'ny lohany. Anisan'izany ny fanavahana ny rano amin'ireo hydrocarbons sy ny fanasarahana ny etona gazy sy entona voajanahary amin'ny renirano. Ireo rafitra fantsona hazo aorian'ny krisimasy ireo dia natsangana tamin'ny kaody fantsom-piraketana amerikanina mekanika B31.3 miaraka amin'ny valves namboarina mifanaraka amin'ny famaritana valizy API toy ny API 594, API 600, API 602, API 608 ary API 609.
Ny sasany amin'ireto rafitra ireto dia mety misy koa vavahady API 6D, baolina ary valve valizy. Koa satria misy fantsom-pivezivezy eo amin'ny lampihazo na sambo fandefasana anatiny ao amin'ilay fotodrafitrasa, dia tsy mihatra ny fepetra hentitra hampiasana valves API 6D ho an'ny fantsom-pitaterana. Na dia maro karazana valizy aza no ampiasaina amin'ireto rafitra fantsona ireto, ny karazana valizy dia ny valizy.
Na dia takona tsy ho hitan'ny masonkarena aza ny ankamaroan'ny fantsona dia mazàna miharihary ny fisiany. Famantarana kely milaza ny "fantsom-pitrandrahana solika" dia famantarana iray mazava amin'ny fisian'ny fantsom-pitaterana ambanin'ny tany. Ireo fantsona ireo dia misy valves manan-danja maro mandritra ny halavany. Ny valves shutoff pipeline maika dia hita amin'ny elanelam-potoana araky ny fehezan-dalàna, kaody ary lalàna. Ireo valva ireo dia manompo amin'ny serivisy ilaina amin'ny fanokanana ny fizarana fantsona iray raha sendra misy rano na rehefa ilaina ny fikojakojana.
Miely eny amoron'ny lalan'ny fantsom-pifandraisana ihany koa ireo fotodrafitrasa mipoitra avy eo amin'ny tany ary misy fidirana andalana. Ireto gara ireto no fonenan'ny fitaovana fandefasana "kisoa", izay misy fitaovana ampidirina ao amin'ny fantsom-panafody na hijerena na hanadio ny tsipika. Ireo toby fandefasana kisoa ireo dia matetika misy valves maromaro, na karazana vavahady na baolina. Ny valva rehetra ao amin'ny rafitry ny fantsona dia tsy maintsy feno-port (open-open) hahafahana mandalo kisoa.
Ny fantsom-panafody dia mila angovo ihany koa hiadiana amin'ny fahasosorana amin'ny fantsona ary hitazomana ny tsindry sy ny fikorianan'ny tsipika. Compressor na tobin-tsolika izay toa toy ny kinova kely amin'ny zavamaniry fanodinana tsy misy tilikambo vaky avo no ampiasaina. Ireny fiantsonana ireny dia tranon'ny am-polony am-bavahady, baolina ary fanaraha-maso ny fantsona.
Ny fantson-drano mihitsy dia namboarina mifanaraka amin'ny fenitra sy kaody isan-karazany, raha toa kosa ny valizy fantsona dia manaraka ny API 6D Pipeline Valves.
Misy ihany koa ny fantsom-pifandraisana kely kokoa izay miditra ao anaty trano sy rafitr'ireo varotra. Ireo tsipika ireo dia manome rano sy gazy ary arofanin'ny valves shutoff.
Ny Kaominina lehibe, indrindra ny faritra avaratr'i Etazonia, dia manome etona ho an'ny fanafanana takian'ny mpanjifa ara-barotra. Ireo tsipika famatsiana etona ireo dia miaraka amina valves isan-karazany hifehezana sy hifehezana ny famatsiana etona. Na dia etona aza ny tsiranoka, ny tsindry sy ny mari-pana dia ambany kokoa noho ireo hita amin'ny famokarana setroka mpamokatra herinaratra. Karazan-tsofina isan-karazany no ampiasaina amin'ity serivisy ity, na dia safidy malaza aza ny valva-panafody mendri-piderana.
REFINERY SY PETROCHEMIKA
Ny valves fanodinam-bola dia mampiasa kaontina indostrialy betsaka kokoa noho ny sehatra valva hafa. Ny refinera dia trano misy tsiranoka manimba ary amin'ny tranga sasany, mari-pana ambony.
Ireo antony ireo dia mibaiko ny fomba fananganana valves mifanaraka amin'ny famaritana ny valizy API toy ny API 600 (valves vavahady), API 608 (valve valves) ary API 594 (valve valves). Noho ny serivisy henjana atrehin'ireo maro amin'ireo valves ireo dia matetika no ilaina ny vola avela amin'ny harafesina. Ity allowance ity dia miseho amin'ny alàlan'ny hatevin'ny rindrina lehibe kokoa izay voafaritra ao anaty antontan-taratasy famolavolana API.
Saika ny karazana vaventy lehibe rehetra dia hita be dia be amin'ny fanadiovana lehibe mahazatra. Ny valva vavahady eny rehetra eny dia mbola ny mpanjakan'ny havoana ihany no manana mponina betsaka indrindra, saingy ny valves ampahefatry ny telovolana kosa dia mahazo ampahany betsaka amin'ny anjarany eny an-tsena. Ny vokatra ampahefa-dalana mahomby amin'ny fidirana amin'ity indostria ity (izay anjakan'ny vokatra mitandahatra ihany koa taloha) dia misy valizy lolo avo telo heny ary valizy baolina mipetraka amin'ny vy.
Ny vavahady manara-penitra, ny valindrihana ary ny valizy fanaraha-maso dia mbola hita marobe, ary noho ny hatsaran'ny endrik'izy ireo sy ny toekareny amin'ny famokarana, dia tsy hanjavona vetivety izany.
Ny isa faneriterena ho an'ny valves fanodinana dia manomboka amin'ny Kilasy 150 ka hatramin'ny Kilas 1500, miaraka amin'ny Kilasy 300 no malaza indrindra.
Ny vy vy karbaona, toy ny grade WCB (cast) sy A-105 (sandoka) no fitaovana malaza indrindra voalaza sy ampiasaina amin'ny valves ho an'ny serivisy fanadiovana. Ny fampiharana fanodinana maro dia manosika ny fetran'ny mari-pana ambony amin'ny vy vy tsotra, ary ny firakotra maripana ambony kokoa dia voafaritra ho an'ireo fampiharana ireo. Ny tena malaza amin'izany dia ny vy chrome / moly toy ny 1-1 / 4% Cr, 2-1 / 4% Cr, 5% Cr ary 9% Cr. Ny vy vy sy ny alika nickel avo dia ampiasaina ihany koa amin'ny fomba fanadiovana henjana.
Ny indostrian'ny simika dia mpampiasa vaventy amin'ny karazany sy fitaovana rehetra. Manomboka amin'ny zavamaniry bitika kely ka hatrany amin'ireo kompetran'ny petrochemical goavambe hita eo amin'ny morontsiraka Golpo, ny valves dia ampahany lehibe amin'ny rafitry ny fantsona simika.
Ny ankamaroan'ny fampiharana amin'ny fizotry ny simika dia ambany noho ny tsindry noho ny fizotran'ny fanadiovana sy ny famokarana herinaratra. Ny kilasy faneriterena malaza indrindra amin'ny valves sy ny fantsom-pambolena simika dia ny Kilasy 150 sy 300. Ireo zavamaniry simika ihany koa no mpamily lehibe indrindra amin'ny fitrandrahana ny tsena izay nitoloman'ny valves bala tamin'ny valves linear nandritra ny 40 taona lasa. Ny valizy mibontsina mipetraka, miaraka amin'ny fikatonany aotra-leakage, dia mety tsara amin'ny fampiharana zavamaniry simika maro. Ny haben'ny valve ny valiny dia singa malaza ihany koa.
Mbola misy ihany ny zavamaniry simika sy ny fizotran'ny zavamaniry izay tiana ny valizy tsipika. Amin'ireto tranga ireto, ny valva malaza API 603 namboarina, miaraka amin'ny rindrina manify sy lanja maivana, mazàna no vavahady na vavahady globe safidy. Ny fifehezana ny akora simika sasany dia tanterahina amin'ny fomba mahomby amin'ny diaphragm na valizy mihidy.
Noho ny toetra maha-simika ny simika maro sy ny fanamboarana simika dia manakiana ny fifantina ireo fitaovana. Ny fitaovana defacto dia ny sokajy vy vy austenitika 316 / 316L. Ity fitaovana ity dia miasa tsara hiadiana amin'ny harafesina avy amin'ny tsiranoka matetika tsy mandeha amin'ny laoniny.
Ho an'ny rindranasa manaratsy henjana kokoa, ilaina ny fiarovana bebe kokoa. Ny isa mavesatra avo lenta an'ny austenitika vy tsy misy fangarony, toy izany 317, 347 ary 321 dia matetika no voafidy amin'ireo toe-javatra ireo. Ny firaka hafa izay ampiasaina tsindraindray mba hifehezana ny tsiranoka simika dia misy ny Monel, Alloy 20, Inconel ary 17-4 PH.
FIZARANA LNG SY GAS
Ny entona voajanahary voajanahary (LNG) sy ny dingana takiana amin'ny fisarahana amin'ny entona dia miankina amin'ny fantsom-panafody betsaka. Ireo rindranasa ireo dia mitaky valve izay afaka miasa amin'ny maripana ambany ambany amin'ny cryogenika. Ny indostrian'ny LNG, izay mitombo haingana any Etazonia, dia mitady hatrany ny fanavaozana sy fanatsarana ny fizotran'ny famokarana entona. Amin'izany tanjona izany dia nitombo lehibe kokoa ny fantson-drano sy ny valves ary nisondrotra ny fepetra takiana amin'ny tsindry.
Ity toe-javatra ity dia nitaky mpamokatra valizy hamolavola endrika hameno ireo masontsivana henjana kokoa. Ny valizy baolina sy lolo-telovolana dia malaza amin'ny serivisy LNG, miaraka amin'ny 316ss [vy tsy misy fangarony] no fitaovana malaza indrindra. ANSI Class 600 no valindrihana fanerena mahazatra ho an'ny ankamaroan'ny fampiharana LNG. Na dia ny vokatra fihodinana ampahefatra aza dia karazana valizy malaza indrindra, ny vavahady, ny globe ary ny valva fanamarinana dia hita ihany koa amin'ireo zavamaniry.
Ny serivisy fisarahana entona dia mitaky fizarana entona amin'ny singa fototra ifotony. Ohatra, ny fomba fanasarahana ny rivotra dia miteraka azota, oxygen, helium ary gazy hafa. Ny toetran'ny maripana ambany indrindra amin'ny fizotrany dia midika fa maro ny valizy cryogenika no takiana.
Na ny zavamaniry mampisaraka ny LNG na ny entona dia samy manana valves ambany-mari-pana izay tsy maintsy mijanona hiasa amin'ireo fepetra cryogenika ireo. Midika izany fa ny rafitra famonosana valizy dia tsy maintsy asandratra hiala amin'ny tsiranoka ambany-mari-pana amin'ny alàlan'ny fampiasana tobin-tsolika na fantsona. Ity tsanganana gazy ity dia manakana ny tsiranoka tsy hamorona baolina ranomandry manodidina ny faritra famonosana, izay hisorohana ny vodin-tsofina tsy hihodina na hiakatra.
Manodidina antsika ny tranon'ny varotra fa raha tsy mijery tsara isika rehefa manamboatra azy ireo, dia tsy misy fantatsika loatra momba ny arterina be dia be miafina ao anatin'ny rindrin'ny masonry, vera ary vy.
Ny anarana iraisana amin'ny ankamaroan'ny trano dia rano. Ireo rafitra rehetra ireo dia misy rafitra fantsona maro karazana izay mitambatra amin'ny fitambaran'ny hidrôzenina / oxygen amin'ny endrika ranon-javatra azo amina rano, rano maloto, rano mafana, rano fotsy ary fiarovana afo.
Raha ny fahitana ny fahaveloman'ny trano, ny rafitry ny afo no tena manakiana. Ny fiarovana afo amin'ny tranobe dia saika omena sakafo eran'izao tontolo izao ary feno rano madio. Mba hahomby ny rafitry ny rano, dia tsy maintsy atokisana izy ireo, manana tsindry ampy ary mora hita manerana ny rafitra. Ireo rafitra ireo dia natao hatanjaka ho azy raha misy afo.
Ny tranobe avo lenta dia mitaky serivisy fanerena rano mitovy amin'ny gorodona ambony toy ny rihana any ambany ka tsy maintsy ampiasaina ny paompy sy ny fantsom-panafody avo lenta hampiakatra ny rano. Ny rafitry ny fantson-drano matetika dia Kilasy 300 na 600, miankina amin'ny haavon'ny fananganana. Ny karazana valves rehetra dia ampiasaina amin'ireo fampiharana ireo; na izany aza, ny volavola valizy dia tsy maintsy eken'ny Underwriters Laboratories na Factory Mutual ho an'ny serivisy lehibe amin'ny afo.
Ireo sokajy sy karazana valves izay ampiasaina amin'ny valizy fanompoana afo dia ampiasaina amin'ny fizarana rano azo sotroina, na dia tsy hentitra loatra aza ny fizotran'ny fanekena.
Ny rafi-panafody rivotra iainana hita ao amin'ny orinasa lehibe toy ny trano biraon'ny trano fandraisam-bahiny, trano fandraisam-bahiny ary hopitaly dia matetika afovoany. Manana chiller na boiler lehibe izy ireo mba hampangatsiaka na ranoka hafanana ampiasaina amin'ny famindrana hafanana mangatsiaka na avo. Ireo rafitra ireo dia matetika no tsy maintsy mitana vata fampangatsiahana toy ny R-134a, hydro-fluorocarbon, na raha misy rafitra fanamafisana lehibe, etona. Noho ny haben'ny lolo sy ny valves valves, dia nanjary malaza amin'ny rafitra chiller HVAC ireo karazany ireo.
Amin'ny lafiny etona dia misy valve fihodinana telovolana efa niditra an-tsehatra nampiasaina, nefa maro ny injeniera plumbing mbola miantehitra amin'ny vavahady mivantana sy valvelobe eran-tany, indrindra raha mitaky faran'ny lasitra ny fantson-drano. Ho an'ireo fampiharana setroka antonony ireo, ny vy dia naka ny toeran'ny vy nohon'ny vy azo vy azo.
Ny rafitra fanamainana sasany dia mampiasa rano mafana fa tsy etona ho tsiranoka famindrana. Ireo rafitra ireo dia aroso tsara amin'ny valves varahina na vy. Ny valizy sy ny valizy lolo mipetraka eo amin'ny telovolana dia be mpitia, na dia misy aza ny famolavolana andalana sasany mbola ampiasaina.
Na dia tsy azo jerena aza ny porofon'ireo fangatahana valizy voalaza ato amin'ity lahatsoratra ity nandritra ny dia nankany Starbucks na tany an-tranon'i Bebe, dia misy eo akaikiny foana ny valizy tena lehibe. Misy mihitsy aza ny valves ao amin'ny moteran'ny fiara ampiasaina mankany amin'ireo toerana ireo toy ireo ao amin'ny carburetor izay mifehy ny fikorianan'ny solika ao anaty motera ary ireo ao amin'ilay motera izay mifehy ny fikorianan'ny lasantsy ao anaty pistons ary mivoaka indray. Ary raha tsy mifanakaiky amin'ny fiainantsika andavan'andro ireo valves ireo dia diniho ny zava-misy fa mitempo tsy tapaka ny fontsika amin'ny alàlan'ny fitaovana fanaraha-maso mikoriana efatra lehibe.
Ity dia ohatra iray hafa fotsiny amin'ny zava-misy fa: valves dia tena na aiza na aiza. VM
Ny fizarana II amin'ity lahatsoratra ity dia manarona indostria fanampiny izay ampiasaina valves. Mandehana any amin'ny www.valvemagazine.com hamaky momba ny pulp & taratasy, ny fampiharana an-dranomasina, ny tohodrano ary ny herinaratra elektrika, ny herin'ny masoandro, ny vy sy ny vy, ny aerospace, ny geothermal, ary ny famokarana sy famolavolana asa tanana.
GREG JOHNSON dia filohan'ny United Valve (www.unitedvalve.com) any Houston. Izy dia tonian-dahatsoratra mpandray anjara amin'ny Magazine VALVE, talen'ny filankevitry ny fanamboarana Valve ary mpikambana ao amin'ny birao VRC ankehitriny. Izy koa dia miasa ao amin'ny VMA's Education & Training Committee, no lefitra lefitry ny Komitin'ny Serasera VMA ary efa filohan'ny Fikambanan'ny Mpanara-penitra ny mpamokatra.